Izinqolobane ZikaPhillip Morris - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Incwadi evulekile eya ku-STAT: Isikhathi Sokuba Namazinga Aqinile Wokubonisa Okusobala
Posted on February 28, 2018 by UStacy Malkan
Othandekayo uRick Berke noGideon Gil,
Ngesikhathi lapho umphakathi ubuza ukufaneleka kwemithombo yezindaba - nesayensi uqobo - kubalulekile ekushicilelweni kwezempilo nezesayensi okufana ne STAT ukusebenzela umphakathi ngeqiniso eliningi kanye nokwenza izinto obala ngangokunokwenzeka. Sikubhalela ukukucela ukuthi uqhubekele phambili njengabaholi ukubhekana nenkinga enkulu ekusetshenzisweni kwesayensi: abafundi bacatshangelwa izinkampani eziphusha ama-ajenda enqubomgomo ngababhali be-PR abazenza ngathi bazimele kanti cha.
NgoFebhuwari 26, i-STAT yehluleka ukwenza umsebenzi wayo emphakathini ukuhlinzeka ngokusobala lapho ishicilela umbono ikholomu nguHenry Miller, noma ngabe uMiller wayekade ebanjwe eshicilela umsebenzi obhaliwe kaMonsanto-ghost ngaphansi kwegama lakhe eForbes.
Ngemuva kweNew York Times wembula ihlazo lokubhalwa kwesipoki sikaMiller ngo-Agasti 2017, iForbes yalahla uMiller njengombhali wephephandaba futhi yasusa zonke izindatshana zakhe ngoba wephule inqubomgomo yeForbes edinga ababhali bemibono ukuthi badalule ukungqubuzana kwezintshisekelo, futhi bashicilele owabo umsebenzi kuphela - inqubomgomo i-STAT nayo kufanele yamukele. (Ukuvuselelwa: I-STAT inokushayisana kwezintshisekelo inqubomgomo yokudalula lapha futhi usazisa ukuthi uMiller akabikanga zingxabano.)
Kusukela isiqephu sokubhalwa komoya, umsebenzi kaMiller uqhubekile nokuphakamisa amafulegi abomvu abomvu.
Ikholamu yakhe yakamuva ihlasele imboni yezinto eziphilayo kuNewsweek itholwe ngemininingwane enikezwe yilowo owayekhulumela iMonsanto, uJay Byrne, obudlelwano bakhe neMonsanto abuzange buvezwe, futhi ikholomu kaMiller ilandele eduze imiyalezo uByrne ayenayo usebenze neMonsanto ngenkathi kusebenzisana ukusetha iqembu langaphambili yezifundiswa ukuhlasela abagxeki bezimboni, ngokusho kwe- Ama-imeyili avuliwe ngu-US Ilungelo Lokwazi. Esihlokweni sakhe seNewsweek, uMiller uphinde wazama ukudicilela phansi isithunzi sikaDanny Hakim, intatheli yeNew York Times eveze ihlazo likaMiller lokubhala ngezipoki - ngaphandle kokusho ihlazo.
Ngaphezu kwalokhu kwehluleka kwakamuva ukudalula ukungqubuzana kwezintshisekelo zakhe, uMiller une- eside, umlando olotshiwe njengobudlelwano bomphakathi kanye nokunxenxelwa ngokwesivumelwano kwezinhlangano.
Ku-1994 Imemo yecebo le-PR kuPhillip Morris, ama-APCO Associates abhekise kuMiller "njengomsekeli oqavile" emkhankasweni womhlaba wonke wokulwa nemithetho kagwayi. Ngo-1998, uMiller wabeka izinsizakalo zakhe ze-PR ezinkampanini ku "Uhlelo Lokusebenza Lokukhuthaza Isayensi Yomsindo Kwezempilo, Inqubomgomo Yezemvelo kanye ne-Biotechnology." U-2015 Uhlelo lweMonsanto PR "ukuhlela ukukhala" ngokumelene nososayensi bephaneli lomdlavuza le-IARC le-World Health Organisation elibalwe njengelokuqala ukukhishwa kwangaphandle: "Bandakanya uHenry Miller."
Ngabe izintshisekelo zebhizinisi nazo bezingemuva kombono kaMiller, oshicilelwe kuleli sonto yi-STAT, wokuthi iNational Institutes of Health akufanele isakhokhela izifundo ezihlanganayo zezempilo?
Ukunconywa kwendatshana ye-STAT kaMiller evela kokuthandwayo kwe- UJeff Stier, osebenzela i-Koch-esebenzisana ne-Consumer Choice Center, futhi URona Applebaum, owayengumphathi omkhulu weCoca-Cola ngubani ihlele iqembu langaphambili ukwenza isayensi ekukhuluphaleni ngokweqile, kwenza i-athikili ibonakale ifana nolunye uhlobo lweqembu eliphambili lenkampani.
Bekungeke kube okokuqala ukuthi imboni eyenza imithi ibaleke ngokusebenzisa i-STAT ukukhuthaza i-ajenda yayo yezepolitiki neyokuthengisa. NgoJanuwari owedlule, i-STAT yavumela amalungu amabili eqembu eliphambili lenkampani Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo (ACSH) ukuze opine ukuthi uhulumeni angavunyelwa ukuvimbela odokotela ekuchazeni i-OxyContin. Kepha le ndatshana ayidalulanga ukuthi i-ACSH isitholile uxhaso kusuka izinkampani ezidayisa izidakamizwa kanye izinkonzo zayo ezinkampanini ezivumelwaneni ze-quid proo zokuvikela imikhiqizo yabo kanye nama-ajenda enqubomgomo.
NgoSepthemba, i-STAT ihoxise udaba olushicilelwe ngaphansi kwegama likadokotela otuse abasebenza embonini yezemithi, ngemuva kokubhala kukaKevin Lomangino ku-HealthNewsReview.org ukuthi udokotela uthole ngaphezu kwama- $ 200,000 ezinkampanini zemithi. Uphenyo lwabe seludalula ukuthi inkampani yabakwa-PR ibhale isipoki ngendatshana kadokotela.
"Umzamo omkhulu ka-pharma wokubhala izipoki ku-STAT uphele kabi - kodwa hhayi ngokwanele," kusho uprofesa wezobuntatheli uCharles Seife kuSlate. "U-STAT uyihoxisile le ndaba, kodwa ngezizathu ezingalungile futhi ngaphandle kokuxazulula inkinga yangempela."
Isikhathi se-STAT sokubhekana nale nkinga, futhi sibe yingxenye yesixazululo ekuletheni iqiniso nokubonisa obala ekubikeni kwesayensi. Umphakathi unelungelo lokwazi ukuthi izinkampani zibhala nini, noma zenze nini izigxivizo zeminwe yabo yonke indawo imibono yezifundiswa ezithi zizimele.
"Njengoba nje omagazini bezokwelapha bebeqala ukuqinisa imithetho mayelana nokungqubuzana kwezintshisekelo, bephoqa ukudalulwa okwengeziwe ngezinhloso ezifihlekile zezindatshana ezithile zocwaningo, imithombo yezindaba nayo kumele ibhekelele," kubhala uSeife kuSlate.
“Kumele bafunde ukuyeka ukukhulisa imiyalezo yamaqembu angaphambili bese beshaya iso ngemikhuba efana nokubhala ngezipoki emakhasini abo wokuhlela. Ngamafuphi, abezindaba kumele babone ukuthi njalo lapho bephindaphinda umyalezo wonodoli, kulimaza ngokuthembeka kwesitolo. ”
Ngokwethembeka kwe-STAT, nokwethenjwa kwabafundi bayo, sikunxusa ukuthi usebenzise inqubomgomo ecacile neqinile yokufuna bonke ababhali bakho ukuthi banikeze ukudalulwa okugcwele ngokushayisana kwezintshisekelo, kufaka phakathi izinkokhelo abazithola ezinkampanini, nomsebenzi abawenzayo ngemuva izigcawu ezinamabhizinisi noma amafemu abo e-PR ukukhuthaza ama-ajenda ezinkampani.
Abaqondisi Bokubambisana, i-US Ilungelo Lokwazi
buyekeza: Qaphela kusuka UKevin Lomangino, umhleli ophethe i-HealthNewsReview.org: “Siyabonga ngokuqaphelisa umsebenzi wethu nalolu daba, engivuma ukuthi lubalulekile. Ukucaca, @ukhozi_fm baqinise izinqubomgomo zabo ze-COI / obala ukuphendula ekubikeni kwethu njengoba sibhale lapha, "I-STAT iba inhlangano yesi-3 yokubuyekeza izinqubomgomo ngemuva kokuhlolisisa kwethu. ” Kodwa-ke, kulokhu umlobi ngokusobala wehlulekile ukudalula iqhaza lababhali bomoya emisebenzini yakhe edlule, ngakho-ke anginasiqiniseko sokuthi i-STAT ingathemba / kufanele ithembe noma yisiphi isiqinisekiso asinikezile sokuthi okuqukethwe kungokoqobo. ”
Impendulo ye-USRTK: Siyajabula ukubona i-STAT iqinisa inqubomgomo yayo ye-COI kepha kumele benze kangcono, njengoba icala likaMiller likhombisa. Minan ukwengeza ku-2017 ihlazo lokubhala ngezipoki, UMiller unayo ukudalulwa okuyiphutha kwakamuva futhi umlando omude wokubekwa phambili kwezinkampani. Bona futhi eyethu impendulo kubahleli be-STAT mayelana nenqubomgomo yabo yokudalula i-COI.
Landela uphenyo lwe-US Right to Know ngokubhalisela okwethu incwadi yezindaba lapha, futhi ngicela ucabangele ukwenza umnikelo ukusekela ukubikwa kwethu.
Uphenyo lwethu Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, Abalingani be-APCO, UCharles Seife, Coca-Cola, Isikhungo Sokukhetha Abathengi, UGideon Gil, Henry Miller, UJay Byrne, UJeff Stier, UKevin Lomangino, Monsanto, Newsweek, Phillip Morris, URona Applebaum, URick Berke, Izindaba zesitatimende